Soba Dhoksuu Malee Balleessuun Hin Danda’amu – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosSoba Dhoksuu Malee Balleessuun Hin Danda’amu
The Twin Cities’ Oromo Community is gathering again tonight in Powderhorn Park to mourn the loss of #HachaluHundessa with a candlelight vigil. @MPRnews pic.twitter.com/ahYc5hYdDf
— Evan Frost (@efrostee) July 3, 2020
Dame Boruu: Adooleessa 2, 2020
Guyyaa Jaalatamaan Gootni Oromoo Haachaaluu Hundeessan waregamee jedhamee kaasse eenyu akka isa ajjeesee fi maalif akka dhu’e Uummatni Oromoo marti adda baase baree jira. Waa nisin nuttu himuuf deemtan waan beeknuuf eenyu akka ajjeese gadi baatanii nuuf hin himnaa jennee warra nafxanyaa fi ergamtoota isaanii kadhannee turre. Haachaaluu ajjeessuun xiqqaatee qormaata isaan Saba Oromoo irratti godhan obsa nama fixxachiisa.
Uummatni Oromoo miiraan qabamee waan xixiqaa irratti bobba’ee akka qabsoon Fincila Xumura Gerbummaa galama utuu hin gahiin hin bacancarre eegannaa gochuu qabna. Du’aa fi hidhaan nu baree jira. Nuyis itti barree jirra. Waan sodannuu hin qabnu. Manni hidhaa mana barumsaa qabsawwan akka tahe diinni keenya beekuu qaba. Hidhaan qabsawwan dorsiisuu waan fakkaatu miti.
Guyyaa Guyyaan kijiba wal duraa booda yoo tareessan soba dhugaatti jijjiruun hin danda’amu. Waan guyyaa gyyaan warri bilixignaa gad bahaan Uummata Oromoo itti dubbatan daa’imni isaanii iyyuu isaaniif hin dhugeefattu. Dammqinsi Uummata Oromoo dabballootaa Bilxiginaa ol waan taheef ofumaa dhamaa jiru. Utuu namni isaan gorsu jiraatee soba isaanii illee wal qixxeefatanii waliin sobu danda’u. Warri kun yartuu fi yakkamtu waan tahaniif of itti qaana’uu dhiisanii waan ajjaa’aa isaanii utuu uummatatti gad bahaanii bulgaafachuu baatanii ni wayya.
Waan mar’imaani nama waadu:
Duraan dursee Haachaaluu ajjeesuun tuffii Uummata Ormoof qaban keessa isa olaanaa dha.
Haachaluu akka handura biyya abbaa isaa keessatti hin owwaalmne dhowwachuun tuffii caalaa laphee Uummata Oromoo cabe irratti ibda qabsiisuu dha.
Mana maatii Haachaaluu irratti boobii darbanii fira isaa ajjeessuu fi jeequun tuffii Uummata Oromoo qofa utuu hin taane namumaa keessaa bahu isaanii mirkaneesa. Maatii gadda irra jiru irratti maaliif gadda dabaluun barbaachisaa tahe? Utuu waraanni Kononeel Abiyi marsee jiru Ormi biraa dhufee boobi darbe jechuun namaaf liqifamaa?
Waan nutti eenyu akka Haachaluu ajjeese nutti hin himnaa nuyuu beekne jenneef utuu hin taane seeraa nama ajjeesse qoratee kan dhiyeessu qabu qaama poolisii tahee utuu jiruu, Shimalis Abdisaa nama ajjeese akka owwaalcha Haachaaluu irratti dubbate dhageenye jirra. Dubbiin isaa kun Uummata Oromoo akkuma warri Nafxanyaa horii godhanii yaadan yaaduu isaa fakkaata. Karaa biraa akka Uummatni Oromoo dhugaa jiru hin hordofnaa faanaa dhugaan dhoksuuf wixxifachaa jiru fakkaata.
Waan Haachaaluun nafxanyaa fi Minilkiin balaalefateef “Shaneen” Haachaaluu ajjeese jedhe. Shimalis Abdiisaa eenyuun akka “Shanee” jedhu waan an hin beekneef inni ibsachuu qaba. Poolisa ajjeechaa Haachaaluu qorataa jira jedhameef raga qabatamaa(material witness) waan taheef baayyee barbaadamaa tahuu qaba. Akka haasaaa Obbo Shimalis yoo tahe “Shaneen” kun bilisaa baasaa nafxanyootaa fi leelistuu Minilki tahuu qabdi. Haasaa kana Uummatni Oromoo na irraa fudhata jedhee foloduu yoo dhise isaaf wayya ture.
Waan Obbo Takalaa Uumaa jedhu waan wayyu natti fakkaate. Haasaan isaa waan Koomiishiineri Poolisii jedhe wajjin wal fakkaata. Waan “digisiin asitti nuuf qophaa’e, asitti jalqabee akka asitti raawwatuuf ture. Akka ibsa koomishina poolisaa yoo tahe adda baasee Balderaas, Abiin(Nama)fi kana bira dargagoota ijaaranii, hidhachiisanii Finfinnee keessatti bobbasanii turan. Qabeenyaa Orommo hedduu barbadeessanii jiru. Waraana Mootummaa wajjin tahanii namoota Oromoo baayyee ajjeesanii Jiru. “Addis Ababa yeenya nechi”. “Keketemaachiin wuxxuu” jedhanii Uummata Oromoo Finfinnee keessa jiraatu irratti karaa bilbila bataskaanaa isaanii waraana labsanii turan.
Mootummaan Kononeel Abiyi isaan hidhachiisee karaa isaanis ilmaan Oromoo dhumaa jirani irratti waraana labsee ajjeesaa fi hooggantoota Oromoo mana hidhaatti guraa jira. Haalli uummata keenya Finfinnee keessa baayyee kan nu sodaachisuu fi nu yaadessuu tahee jira.
Haa tahu malee bakka jirru maratti waliif dirmachaa akka qabsoon keenyaa qindaa’inan gara fuula duraa tarkaanfatu gochuuf:
Qaree fi Qeerroon Oromoo gurmaa’aa wal ijaaraa socho’aa
Aarsaa hin barbaachifne baasuu hin qabnu. Bakka dadhabaa ishee rukkutaa. Dingdee fi caasaan ishee barbdeessuu irratti xiyyeefadhaa.
Karaa dandeessan maran hanaanis tahe saaminsaan meeshaa waraanaa ittiin of irraa ittisuu qabdan hidhachuun barbaachisaa taha.
Ilmaan Oromoo RIB, poolisii federaala, poolisii Oromiyaa fi humna darbataa keessa jiran akka isin wajjin dhaabbatan hawwaa dha.
Ilmaan Oromoo humna waraana keesaa sooratan yookaan karaa adda bahanii jiran akka qabsoo uummtaa gargaran jabeessaa gaafadha.
Sochiin gootan kan karaa WBO qinda’e tahuun dirqama. Qabsoon keenya jidduu galummaa WBO yoo hooganamemalee humni keenya gargar faca’ee diinaaf saaxilamna.
Jarjartiin utuu hin taane haala qindaa’een waan wal qabatee qabsoo deemtu galma gaha. Gargaarsa Waaqaa wajjin haa jabaannu.